Pompeo oo sheegay Ilaahey inuu Trump uu u soo diray Israa’iil si uu Iiraan uga badbaadiyo | Baydhabo Online
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompe ayaa sheegay “iney suuragal tahay” Madaxweyne Trump inuu madaxweyne ka noqdo Mareykanka uu ilaahey ugu tala galay inuu Israa’iil kaga badbaadiyo Iiraan.
Pompeo oo wareysi la yeeshay shabakadda Christian Broadcasting xilli uu booqasha ku marayo Israa’iil ayaa sheegay inuu diinta uu aaminsan yahay ay ka keentay inuu sidaasi aamino.
Wuxuuna sida oo kale bogaadiyey dadaalka Mareykanka uu ugu jiro sidi waddamada bariga dhexe dimuqradiyad looga meel marin lahaaa si ay u sii jirto dowladda Yahuudda.
Hadalka Pompeo ayaa imanayaa xilli ay yahuudda u dabbaaldagayaan xuska dadka yahuudda ee gumaadka laga soo badbaadiyey.
Dabbal degga looga magac daray Purim, ayaa sanad walba lagu xusaa dadka yahuudda ee ay boqoradda Esther ka soo badbaadisay Faarisiinta.
Mr Pompeo ma aha mas’uulki ugu horreeyey oo ka tirsan maamulka Trump oo hadal noocaasi ku hadla. Bishi January xoghayaha arrimaha saxaafadda aqalka cad Sara Sanders waxay warbaahinta dad kirishtaanka leeyihiin u sheegtay “inuu ilaahey doonay inuu Trump uu madaxweyne noqdo”.
Tani iyo inta uu Trump uu madaxweyne ka noqday Mareykanka waxaa sii xumaanayey xiriirka Mareyknaka iyo Iiraan u dhaxeeya iyada oo awlaba uu wanaagsaneyn.
Bishi May 2018-ka Madaxweyne Trump wuxuu ka baxay heshiiska Niyuukilarka ee lala galay Iiraan isaga oo Tehraan ku eedeyey iney barnaamijkeeda Niyuukilarka ay sii wadato taasina ay dunida halis weyn gelineyso.
Jimcahanna maamulka Trump wuxuu cunaqabateyn saaray 14 qof oo Iiraan ka soo jeeda iyo 17 hay’adood oo xiriir la leh barnaamijka Niyuukilarka iiraan.